कोरोना संक्रमण : मास्क प्रभावहीन हुनसक्ने यी पाँच कारण :: स्वास्थ्य खबरपत्रिका
डा शेरबहादुर पुन मंगलबार, फागुन २७, २०७६, ११:३२:२२
हाल कोरोना भाइरस (कोभिड-१९) को संक्रमण विश्वव्यापी रुपमा फैलिइरहेको छ। संसारभरि कोरोनाको त्रास बढिरहँदा नेपाली बजारमा मास्कको अभाव भएका समाचारहरु सार्वजनिक भइरहेका छन्। मास्क लगाउने बित्तिकै कोरोनाको संक्रमणबाट बचिहालिन्छ भन्ने धेरैको मनमा लागेको पाइन्छ। तर मास्क लगाउँदैमा कोरोना भाइरसको संक्रमण हुँदैन भन्ने शतप्रतिशत सत्य भने होइन।
१) मास्क लगाउनुको मुख्य उद्देश्य संक्रमितले खोक्दा निकाल्ने र्या्लको छिटा हावामार्फत श्वासप्रश्वास हुँदै किटाणु प्रवेश नगरोस् भन्ने हो। तर संक्रमितले खोक्दा आँखामा पर्यो भने के गर्ने? संक्रमण हात वा कुनै मध्यममार्फत नाक, मुख र आँखामा पुग्दा/छुँदा पनि सर्न सक्छ।
२) विश्व स्वस्थ संगठनका अनुसार मास्क लगाउँदा तथा फुकालेपछि हात साबुन-पानी वा सेनिटाइजरले सफा गर्नुपर्ने भए पनि धेरैले यसो गर्ने गरेको पाईंदैन। यसले गर्दा मास्क लगाए संक्रमणको जोखिम भने यथावत् नै रहने छ।
३) धेरैले बाहिर निस्कँदा मास्क लगाए पनि मास्कसँगै घर फर्कने र निश्चित ठाउँमा नराख्ने वा निश्चित ठाउँमा सनाखत नगर्ने देखिएको छ। त्यस कारण मास्कमा रहेका संक्रमण परिवारका अरु सदस्यसम्म पुग्ने प्रमुख कारक मास्क नै हुनसक्छ।
४) हातको सर-सफाइ कोरोनाबाट बच्ने सबैभन्दा उत्तम विधि मानिन्छ। हालै कोभिड-१९ को संक्रमण दिसा, पिसाब, मुखमा रहेको थुक आदिमा पनि भेटिएका अनुसन्धानहरु प्रकाशित भइरहेको अवस्थामा मास्कको भूमिका मात्र यस मानेमा कम प्रभाकारी हुनसक्छ। अर्थात् श्वासप्रश्वास बाहेक अरु माध्यमहरुबाट पनि संक्रमण सर्न सक्छ भन्ने हो। यद्धयपि यसबारेमा जानकारी आउनेक्रम भने जारी नै छ।
५) मास्कको आकार सबैको अनुहारमा नमिल्ने हुनसक्छ। यसको माथिल्लो वा छेउछाउको भाग खुला हुनेगरी लगाएमा सोही ठाउँहरुबाट संक्रमण छिर्न सक्ने अवस्था सिर्जना हुनसक्छ।
कोभिड-१९ लाई नै लक्षित गरेर सबैले (स्वस्थ मानिसले) मास्क लगाउनुपर्ने आवश्यकता पर्दैन। विशेष गरेर स्वास्थकर्मी वा श्वासप्रश्वास संक्रमित बिरामीको हेरचाहमा खटिएकाहरुले भने मास्कको प्रयोग गर्दा उपयुक्त हुन्छ। तर यसको लागि मास्क लगाउने र सनाखत गर्ने सही विधि भने इमान्दारीपूर्वक पालना गर्नुपर्छ।
कोभिड-१९ महामारी: वर्तमान निदानको अवस्था पिसिआर टेस्टको सजिलै पहुँच नभएको अवस्था या टेस्ट बढाउन साथै कन्ट्याक्ट ट्रेसिङको गर्नुपरेमा एन्टिजेन जस्ता बढिमा आधा घण्टामा हुने टेस्ट गरौं। २३ घण्टा पहिले
प्रदेश १ बजेटः कोभिड रोकथाम, उपचार तथा नियन्त्रणका लागि ४४ करोड ७ घण्टा पहिले
कोभिड खोपले शरीरमा चुम्बकीय शक्ति दिने गलत दाबी ११ घण्टा पहिले
सरकार! चन्दा उठाउँदै उपचार… कहिलेसम्म? ११ घण्टा पहिले
कर्णाली प्रदेश सरकारले सुर्खेतमा अक्सिजन प्लान्ट स्थापना गर्ने ११ घण्टा पहिले
पछिल्लो २४ घण्टामा ४१८७ संक्रमित निको भए १२ घण्टा पहिले
पछिल्लो २४ घण्टामा २७४५ जना संक्रमित, ४१ जनाको मृत्यु १२ घण्टा पहिले
चिकित्सा शिक्षा आयोगको स्वायत्ततामा हस्तक्षेप नगर्न सरकारलाई १२ पूर्वउपकुलपतिको आग्रह १३ घण्टा पहिले
डा कनकबहादुर रावतको सिभियर कोभिड निमोनियाका कारण मृत्यु१७ घण्टा पहिले